Layma's World: ယနေ့ ရန်ကုန်
Posted by lay-ma at 5:33 AM
အမရေ ရန်ကုန်အခြေအနေကို ဟာသလေးစွက်ပြီး တင်ပြသွားပုံ မိုက်မှမိုက် :D
တီကြွက်ရေ့ အိပ်မပျော်လို့မနက်အစောကြီးထလာတာ ရယ်နေရတာ အူပါနာတယ်ဗျာ မျောက်တွေသန်းရှာပြီးအတင်းတုတ်တာ ဘီလိုတုန်း ဟီးးးးးးးးး..........သတင်းတွေကစုံနေတာပဲ ရန်ကုန်မရောက်ဖူးတဲ့သူတောင် သွားချင်စိတ်ပေါက်လာပြီး ။ ချစ်သူရရင် ရန်ကုန်သွားမည် ကြောင်ညာ ကြောင်ညာ။ ဒါနဲ့အပေါ်က ဦးဓာမကြီးဆိုတာ ကျနော် တိသလိုလိုပဲ အဲ့ဦးလေးကြီးတော်တော်ဆိုးနေတယ် ဓာမကြီးနဲ့ထုလိုက်စမ်းပါ တီကြွက်ရယ်။ ရှိသေးတယ် ဟို ငနာကောင် ။
ပြန်အိပ်တော့မယ် မနက်( ၄ )နာရီပဲရှိသေးတယ်။
ယနေ့ရန်ကုန်ကို လာဖတ်သွားတယ် လေးမရေ.. နောင်လည်း အဲဒီလို သတင်းလေးတွေ တင်ပေးနော်.. ရီရလို့.. :D
ယနေ့ရန်ကုန်ဆိုတာ မနေ့က ရန်ကုန်လို မဟုတ်တာတော့ သေချာတာပေါ့ လေးမရယ်.. အဲဒီလိုပဲ တချိန်ကြရင် နောက်မျိုးဆက်သစ်တွေ ရန်ကုန်ကို မမှတ်မိမှာစိုးရတယ်.. အမတို့တောင် မျက်စိခပ်လည်လည်ပဲ..
ယောင်းမကတော့ လုပ်ပြီ ...
ကိုမုတ်သုန်ဆီမှာလည်း မကြာမကြာသွားဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ...
ရေးထောင့်တွေးထောင့်တွေမတူတော့ တယောက်တမျိုးဆီ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဟ ...
နောက်လည်း အလျဉ်းသင့်သလို ရေးဦးနော် ... မိုက်တယ်ဟ ..
အစဖော် အကြံပြုတဲ့ ကိုညိုထက်ကြီးကိုလည်း ကျေးဇူး
ငါ့အမကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ မြို့တော်ရန်ကုန်ဆိုတာကြီးကို မရင်းနှီးပေမယ့် ခုလိုဖတ်လိုက်ရတော့လဲ အားလုံးကို သိသွားရသလိုလိုပဲ။ ပြန်ချင်ပြီ :(
မျောက်ရွာမှ မျောက်များ သန်းရှာရင်း ဗိုလ်ချုပ်ဈေးအကြောင်း အတင်းတုပ်လျက်ရှိ….။
၀င်ကြေး ၁၀၀ … ထွက်ကြေး ၁၀၀…(ပါကင်မရလို့ တပတ်ပြန်ပတ်…ပြန်ဝင်ရင်လည်း ၁၀၀ )…။
သွားချင်နေတဲ့ ရန်ကုန် မျက်စိထဲကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်လာတယ်
ဒီစာမျိုးကို သရော်စာလို့လည်း ခေါ်လို့ရတယ်။ မိုက်တယ် လေးမရေ
မီးပျက်တာ လဲ ထည့်ပေးဦးနော်....ချစ်မ...
ချုမွန်တို့ လမ်းမှာတော့လေ ၂၄ နာရီမှာ ၂ နာ
ချုမွန် တို့လမ်းက ၂၄ နာရီမှာ ၂ နာရီလောက်ပဲ လာတယ်လို့ ပြောမို့ဟာကို ......
ထင်းထင်း လင်းလင်းပါဘဲ လေးမရေ...
ယနေ့ ရန်ကုန် (၂) ကို မျှော်နေမယ်နော်...။
Han Lynn Kyaw said...
Your ideas are cool.. Thanks for the post.
>ဦးဓါးမကြီး .. ရန်ကုန်အခြေအနေကို သေချာဖတ်ပြီး ပြန် လာရင် ကေ နဲ့လည်နော်...။
>သားကြွက် ... ဘာလို့ အိပ်မပျော်တာလဲ ... စောစောစီးစီး အူနာတာ ရယ်ရလို့ မဟုတ်ပါဘူး .. ဗိုက်ဆာလို့ နေမှာ ...။ မျောက်တွေ သန်းရှာတာ မြင်ဖူးဘူးလား...။ အတင်းတုတ်တာကတော့ လူတွေ လိုပါပဲ ...။
>စိုးမိုးလေး ... အလွမ်းတွေ နဲ့ဝေပေါ့ ... သားကြွက်က ရယ်ရတယ်တဲ့ ... ညီမလေးက လွမ်းတယ်တဲ့ ...။
>မနုစံ ... လေးမ လည်း ရန်ကုန် မှာ လည်နေတုန်းပဲ ...။
>ယောင်းမ ... အလျဉ်းသင့်သလို ရေးရမယ်လား... မြှောက်ပေးတယ်ပေါ့ ...။
>ကျန်စစ် ... ပြန်ချင်ရင် ပြန်ခဲ့လေ... ဟီး..။
>ကိုညိုထက် ... ရေးခိုင်းတာကို လေးမက လည်း ပြန်ပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။ လေးမ ဘော်ဒါတွေက သဘောကျတယ်...ရယ်ရတယ်တဲ့ ...။
>ကိုအညတရ ... ရန်စပြီးမှ ... စတာနော်တဲ့ .. မရဘူး... စိတ်ဆိုးသွားပြီ...။
>ကိုသင့် ...ကိုသင့် ရဲ့ ဖတ်စရာ စာရင်းထဲမှာ ညွှန်းထားတာတွေ့ တော့ ဘ၀င်တောင် မြင့်သွားတယ်... ကျေးဇူးပါရှင်...။
>၃၀၅ ... ကျေးဇူးပါ ... မောင်လေး ၃၀၅ ရေ...။
>စာကလေး... မြှောက်ပေးတဲ့ထဲ စာကလေးလည်းပါတယ်ပေါ့လေ...။
>မိုးချစ်သူ ... အားလုံး ပြောပြလို့ မဖြစ်ဘူးလေ ...ချုမွန်လေးရဲ့ ... သူရို့ ပြန်မလာချင်ဘဲနေဦးမယ်...။
>မသက်ဝေ... ကွက်၂ ကွင်း၂ ပဲလား...။
>Han Lynn Kyaw ... thank u so much for ur comment.